PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-11-01 - Masihleke
Isolezwe lesiXhosa - 2018-11-01 - IINDABA - MANONO MDLAZI
HAY’KE bantase kule nto yam ke yokuba yinkosikazi ematasatasa, inkosikazi yaseBukhosini kooSigcau. Ndithi ke bantase ndikwanguye nomququzeleli wamatheko amakhulu, nindibuze pha kumsasazi woMhlobo Wenene uSinbad.
Ndithi ndalitsho itheko lomhla wokuzalwa kwakhe kwathul’umoya vha! Ayabintle ipati kamalume sana, ndithi ibikhupha ukanin’uBeyonce eqongeni vha! Ebengasemhle usingaye ngesuti yakhe embejembeje yimibala sana, endibona ukuba ebeyikhethelwa nguSis’Poppy Gotyana naloo mibala uWoow! abantu baseNgqushwa ngemibala ekhabanayo!
Wawuke wambona phi ugreen edibana no-brown nomaruni sana, ibiyinto apha endingayichaniyo wabe esithi uPopza “Hayi mntaka Somnci, ndigudi ngemibala mna, ndathi amen!” Mna ke ndiyidlalile eyam indima eqhwabisa izandla uthanda ungathandi.
Ndithi uLume ebekhatshwa zimajorens ukungena kwakhe esangweni, phofu sango elo endilithe red carpert uthanda njani? Labe livulwa, livalwa nguBra Vick eRhafu, bencedisana noDumza eLangkloof, yhoo uyadlala wena!
Ndithi iiMajorens sana imthathe yayokumnikezela kwiScathamiya, sicathamiya eso simthathe sayokumbeka kwisitulo sasebukhosini, uyayiva ke ngoku?
Tsi! Zonke bezime ngobume mntakasisi kuba noDJ Zondani eMthatha ebemile pha ecaleni kwedesika yakhe elinde nje uBaw’uXhotyeni amtsho ngamazwi amnandi usingaye lo, zidume iigumbagumba emva koko tsi! Ndithe ndiyabona naaanko uMzal’uOphra Winfrey ehamba nokanin’uBeyonce, dabaw’uKerry Hilson, Kayis’uWill Smith haybo yamnandi nto!
Babe besithi asidinwe asidinwe, usitsalile la N3 waseDubai osikhuphele kula N2 waseAustralia, saqonda ukuyenza mfutshane masingene ngala tollgate yaseMauritius, esikhuphele kula N1 waseLimpopo, ndathi amen nihambile nje mzala!
Tyhini kusemnandi kunjalo, uDumza engabayekanga ukubagibisela ngamatye abangena bengamenywanga kula gate, nako ndigezelwa ngamaCentane, yhazi amaCentane angamkhupha umntu ngefestile uloliwe ehamba? Andithi eli theko besilenzele kuCentane oohh ndilibele ukunixelela, nango amaCentane endigxotha nakwelo theko, esithi ndiyangxola kwaye ndiyaphithizela ndibagqibela umoya bona, abazuyimela ke le yam mandigoduke, hayi njani na sana ndigxothwe kodwa ipati ibiququzelelwa ndim?
Bafundi ndisalila nanamhlanje!